गौचन हत्याकाण्ड : कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ? « प्रशासन
गौचन हत्याकाण्ड : कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ?
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी शरदकुमार गौचन हत्याको १८ दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले हत्यारा पक्राउ गर्न सकेको छैन । २३ असोजको मध्याह्नमा शान्तिनगरमा गोली हानी गौचनको हत्या गरिएको थियो । घरबाट निस्केका गौचनमाथि आपराधिक समूहले सार्प सुटरको प्रयोग गरी गोली हानेको थियो ।
घटनास्थल वरपर कुनै सीसीटीभी क्यामेराको कभरेज नभएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धानमा केही अप्ठ्यारो परेको थियो । प्रहरीका अनुसार गोली हानी मोटरसाइकलमा भागेका हत्यारा कात्यायनी चोक हुँदै पिंगलास्थान निस्किएर कपनतिर भागेको हुन सक्ने अनुमान छ । प्रहरीले सुटर चढेको भनिएको एक मोटरसाइकल तिलगंगा छेउबाट कपन निस्कने जंगलमा फेला पारेको थियो । बेवारिसे फेला परेको कालो रङको साइन मोटरसाइकल नै सुटरले प्रयोग गरेको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाए पनि त्यसबाट खोजेजस्तो सूचना प्रहरीले पाउन सकेन । स्रोतका अनुसार उक्त मोटरसाइकलका धनी को थिए भनेर प्रहरीले यातायात व्यवस्था विभागबाट जानकारी लिने प्रयत्न गरेको थियो तर मोटरसाइकलको नम्बर विभागको ढड्डामा भेटिएन । प्रहरीले रातो कालो रङको पल्सर मोटरसाइकल पनि घटनामा प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ तर उक्त मोटरसाइकल न प्रहरीले फेला पारेको छ न त्यसका धनी को थिए भन्ने नै । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
Tags : शरदकुमार गौचन